११ पटक सुत्केरी हुँदा पहिलो जिवित बच्चा – Green Ilam
११ पटक सुत्केरी हुँदा पहिलो जिवित बच्चा
बैसाख १७, इलाम : इलाम नगरपालिका १२ साङरुम्बाकी गङ्गा लिम्बुको १० पटकसम्म गर्भ खेर नगएको हुदो हो त उनी ११ बच्चाकी आमा बन्थिन् । २०५९ सालमा विबाह भएयता बच्चाको रहरमा सालिन्दा झै गर्भधारण गरिरहिन् । १७ बर्षभित्र १० पटक धारण गरेको गर्भ सबै खेर गयो । ११ औं पटक भने डा. प्रभु शाहको मेडिकल टिमले उनको बच्चाको ज्यान जोगायो ।
गर्भ धारण गरेको कहिले ५ महिनैमा त कहिले ८ महिनामा उनको गर्भ खेर जान्थ्यो । कहिले भने जन्मिदा मृत बच्चा मात्र जन्मिन्थ्यो । केहि महिना अघि भिडियो एक्सरे गर्न इलाम अस्पताल आएकी गङ्गालाई मेडिकल हिस्ट्री सोध्दा १० पटक गर्भ खेर गईसेकेको बताएपछि डाक्टर प्रभु शाह अचम्मित भए । अनि गङ्गालाई ८ महिनामै अस्पताल आउन सुझाव दिए । सुझाव अनुसार इलाम अस्पताल आएकी गङ्गाको शल्यक्रियाबाट स्वस्थ्य बच्चा जिवितै निकालियो ।
शल्यक्रियापछि डा. शाहले भने, ‘शल्यक्रिया गरेर हेर्दा बच्चाको साल छुट्टिन लागेको जस्तो देखियो, सायद उनको गर्भ खेर गएको कारण त्यै हुन सक्छ ।’ उनले थपे, ‘गर्भ खेर गएको कारण पत्ता लगाउने परिवारले प्रयास नगरेको कारण निरन्तर गर्भ खेर गईरहेको हुन सक्छ, एउटा महिलाको लागि १०÷१० पटक बच्चा खेर जानु कहाँ चानचुने कुरा हो र ?’ दुर दराजका मानिसहरु अझै पनि गर्भसम्बन्धि यस्ता घटनाको शिकार भईरहेकोमा उनले चिन्ता समेत ब्यक्त गरे । इलाम अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डाक्टर प्रभु शाहको मेडिकल टिमले यस घटनालाई ठूलो उपलब्धि मानेको छ । हाल बच्चा स्वस्थ्य छ ।
गङ्गा दङ्ग हुदै भन्छिन्, ‘११ पटकको प्रयासमा पहिलो पटक आफ्नो बच्चाको जिवित अनुहार हेर्न पाईयो । डाक्टर प्रभु शाह हाम्रो जीवनमा साच्चिकै प्रभु बनेर आउनुभयो ।’ उता गङ्गाका पति नविन कुमार लिङ्गदम भने खुट्टाको चोटका कारण अस्पताल आउन पाएनन् । उनलाई आफ्नो पहिलो बच्चालाई छातीमा टासेर राख्न मन छ । फोन सम्बादमा उनले भने, ‘बच्चाको अनुहार फोटोमा मात्र हेरेको छु, कहिले डिस्चार्ज भएर घर आउला भनेर पर्खेर बसेको छु ।’
Tags: Ilam HospitalPrabu Shah
बृद्धआश्रमलाई दिपाको सहयोग
दुई युवा व्यवसायीले थालेको इलामेली किचन अभियानको नालीबेली (३५ तस्बीरहरु सहित)